eSancharpati | फागु पुर्णिमाको रातमा गर्नुस यो एक कार्य, चौतर्फी लाभ मिल्नेछ ! - eSancharpati फागु पुर्णिमाको रातमा गर्नुस यो एक कार्य, चौतर्फी लाभ मिल्नेछ ! - eSancharpati
फागु पुर्णिमाको रातमा गर्नुस यो एक कार्य, चौतर्फी लाभ मिल्नेछ !
होलीले सम्पूर्ण नेपाली जनमा हर्षोल्लास ल्याउने गर्दछ । रङ्ग दलेर शुभकामना साटासाट गर्दै होली मनाइने गरिन्छ ।
सदियौँदेखि होली मनाइँदै आएको छ, तर एउटा गुनासो प्रत्येक वर्षको होलीमा आउने गर्छ । होली खेल्न मन नहुनेहरूलाई रङ्ग नदल्नु पानी नछ्याप्नु । तर यो लागु भएको पाइदैन् । जबरजस्ती गर्नेलाई कारबाही गरिने भने पनि व्यवहारिक रूपमा भने लागु भएको पाइँदैन ।
प्रशासनले यस पटक भने इच्छा विपरीत रङ्ग दल्ने र लोला हान्नेलाई दुई वर्ष थुनामा राख्ने कानुन ल्याएको छ । तर त्यो कत्तिको लागु हुने हो हेर्न बाकी नै छ । रङमा खुर्सानीको धुलो हाल्ने, फोहोर पानीले छ्याप्ने गरिएको पाइएको छ ।
यसले उत्सव नभएर होलीप्रति नकारात्मक सोच जगाउँछ । होलीका दिन अति आवश्यक काम परेर बाहिर निस्किएका जो कोहीलाई सहमतिमा नै रङ्ग दल्नु वेश हुन्छ । कतिपय शोकको घडीमा रहेकाले रङ्ग लगाउन हुँदैन । त्यसप्रति पनि सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, तर्क आफ्नै आफ्नै हुन्छ । होलीमा जर्वरजस्ती गर्नेहरू भन्ने गर्छन् – वर्ष दिनमा आउने होलीमा रङ्ग नदलेर कहिले दल्ने ? तर्क ठिकै भए पनि इच्छा विपरीत कसैको शरीरमा रङ्ग र लोला हान्न कसैलाई छुट छैन । भाङ र गाँजाको नशामा खेलिने होलीले स्वास्थ्यमा असर त छदै छ अकल्पनीय दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले यसप्रति सज हुन आवश्यक छ ।
होलीमा त हो चाखी हेरौँ भन्नेहरू यसको लतमा दुर्व्यसनीमा फस्न सक्छन् । केही क्षण यसको रमझममा भुले पनि बानी परेको खण्डमा यसको दीर्घकालीन असर नराम्रो हुन्छ । आर्थिक क्षति छदै छ स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पुर्याउदछ ।
त्यसैले स्वच्छ भएर होलीमा समाहित हुनु नै राम्रो हुनेछ । होली हामी नेपालीको उत्सव हो तर होलीको नाममा पनि हिमाल, पहाड, तराईमा विभाजन गरिएको छ, छुट्टाछुट्टै दिन मनाउने भनेर । यसले गर्दा एउटै देशमा रहेका नेपालीहरूमा टाढा रहेको अनुभूति दिलाउँछ ।
नेपाली हुनुको, दाजुभाइ दिदी बहिनी हुनुको सद्भावलाई यसले मनमा खिन्नता ल्याउँदछ । भनाई नै छ नि ‘हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई’ । यसलाई बरु एकै दिन बनाउन आवश्यक देखिन्छ । तराईमा उल्लास हुँदा होलीको पहाडमा पनि खुसीयाली छाएको हुनुपर्छ, अनि हिमाल पनि । होली हिन्दु संस्कृतिमा प्रत्येक वर्षको फागुन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् होली पूर्णिमाको दिन मनाइन्छ ।